माओवादी केन्द्रले भन्यो : प्रधानमन्त्रीले २३ चैतभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ | सुदुरपश्चिम खबर
१८ चैत, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ चैतभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको छ । नभए सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए ।
गुरुङले भने, ‘आज १८ गते भइसक्यो । २३ गते ३० दिन पुग्दैछ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लियो भने वैधानिकता हासिल हुनसक्छ। अन्यथा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने प्रश्‍न उठ्ने देखिन्छ ।’ (अनलाइनखबर बाट सभार)
ओम्नी प्रकरणमा भानुभक्त ढकाललाई कारबाही सिफारिस !!
लामो समयदेखिको खडेरीका कारण पानीका मुलहरु सुक्दै गए पछि बैतडीका बिभिन्न ठाउँमा खानेपानीको समस्या बढ्दो !!